ग्रिजम्यान फर्किएपछि कस्तो बन्ला एथलेटिकोको अग्रपंक्ति ? – The Public Today
ग्रिजम्यान फर्किएपछि कस्तो बन्ला एथलेटिकोको अग्रपंक्ति ?
विजय कुमार सिंह साउन १, २०७८ ११:५० am
एजेन्सी : एथ्लेटिको र बार्सिलोनाबीच खेलाडी साटफेर गर्नेगरी सहमति गर्ने चर्चा छ । यस सहमतिअनुसार एन्टोनियो ग्रिजम्यान एथ्लेटिको फर्कनेछन् भने साउल निगुईज बार्सिलोना जानेछन् ।
दुई वर्षअघि मोटो रकम खर्चिएर बार्साले एथ्लेटिकोबाट ग्रिजम्यानलाई भित्र्याएको थियो । तर, उनको प्रदर्शन पछिल्लो समय खस्केको छ । यता, एथ्लेटिकोमा साउल निगुईज चम्किएका छन् । दुई वर्षमै ग्रिजम्यान किन एथ्लेटिको फर्कन लागे ? यो बुझ्न पहिले लियोनल मेस्सीबारे बुझ्नुपर्छ ।
मेस्सीलाई राख्ने सहमति
बार्सिलोना र मेस्सीबीच नयाँ सम्झौताका लागि सहमति बनिसकेको छ । सहमति भइसकेपनि उनीसँग सम्झौताका लागि बार्सिलोनाले क्लबमा धेरै तलब खाने केही खेलाडीलाई बेच्नुपर्ने हुन्छ । किनकी, सबैलाई क्लबमा राख्ने हो भने बार्सिलोनाको टोलीले कुल खर्च गर्ने तलब रकमले ला–लिगाको मापदण्ड पार गर्नेछ । स्पेनमा फुटबलमा टोलीले तलबमा खर्च गर्न पाउने रकमलाई लिएर निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । त्यहीकारण अन्य महँगा खेलाडी बेचेर तलब कम कटौती गर्ने, मेस्सीलाई राख्ने अनि कम तलब खाने युवा खेलाडीहरु भित्र्याउने बार्साको योजना छ । मेस्सी आफैंले बार्सिलोनामा ५० प्रतिशत तलब कटौती हुनेगरी सम्झौता गरेका छन् ।
ग्रिजम्यान एथ्लेटिको म्याड्रिडका प्रशिक्षक डिएगो सिमोनीका प्रिय खेलाडी हुन् । उनी क्लबमा फर्कनुको अर्थ सिमोनीसँग टिमका लागि अग्रपंक्तीमा धेरै विकल्प हुनु हो । अहिले पनि लुईस सुआरेज र जाओ फेलिक्सजस्ता स्टार एथ्लेटिकोमा छन् ।
एथ्लेटिको छाडेपछि पहिलेजसरी चम्कन नसकेका ग्रिजम्यान फेरि लयमा फर्कन पनि सक्छन् ।
यता, उमेर जतिसुकै बढेपनि सुआरेजको खेलमा कुनै खोट देखिंदैन । उनले गत सिजन एथ्लेटिकोलाई ला–लिगा उपाधि जिताएका थिए । त्यसक्रममा उनले ३२ खेलमा २१ गोल गरेका थिए ।
जाओ फेलिक्स यस आक्रामक टोलीका अर्को हिस्सा हुनेछन् । यी युवा पोर्चुगालीले गत सिजन निकै उत्कृष्ट खेलेका थिए । तर, चोटका कारण केही समय मैदानबाहिर पनि रहे । यस सिजन शल्यक्रिया गरिसकेकाले उनी फेरि पहिलेजस्तै उत्कृष्ट रहने क्लबको आशा छ ।
आफ्नो रक्षात्मक खेलका लागि चिनिएका सिमोनीले तीन खेलाडीलाई कसरी मैदान उतार्लान् भन्ने पनि लाग्नसक्ला । तर तीनवटै खेलाडी मेहिनत गर्ने र आफ्नो रक्षात्मक काम पनि पूरा गर्ने हो भने सिमोनीलाई कुनै गाह्रो हुनेछैन । यस्तो अवस्थामा यो लाईनअपले युरोपका कुनै पनि विपक्षीमाथि गम्भिर समस्या सिर्जना गर्नसक्छ ।